KIA , K3000 (TRUCK) , 2015 , BGO – Super Seven Stars
KIA , K3000 (TRUCK) , 2015 , BGO
Buy For 15 000$
Engine Type4- Cylinder
Warranty Expiry Date 05 . May . 2020
Insurance Expiry Date -
K 3000 သည် 2015 Model ဖြစ်ပြီး Engine power 3.0 L / Diesel /5Speed Manual တစ်တန်ခွဲ ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
KIA Pre Owned Cars ကားများအား ဝယ်ယူလိုပါက လက်ငင်းငွေချေစနစ် (သို့မဟုတ်) အများဆုံး (၁ )နှစ် အထိ အရစ်ကျစနစ် ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ကားတန်ဖိုး၏ ၃၀% ပေးချေပြီး ကားအား ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်….
KIA K-3000သည်5Speed Manual Transmission 3.0 JT Diesel Engine အမျိုးအစားပါသည်။
K-3000 တစ်တန်ခွဲကားမှာအလျား 11 ပေနှင့်3လက်မရှိ၍အနံမှာ 5ပေနှင့်4လက်မ ဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာ။
ပုံမှန်Truckများနှင့်မတူဘဲအားသာချက်မှာDriver ထိုင်ခုံ၏နောက်မှီဘုမှ ယာဉ်မောင်းသူ၏ ခါးအနေအထားသက်တောင့်သက်သာရှိစေမည့်ပုံစံကိုစိတ်တိုင်းကျချိန်ညှိယူနိုင်မည့် ခလုတ်ပါဝင်ပါသည်။
လုပ်ငန်းသုံး Truck ဖြစ်သော်လည်းထိုင်ခုံများမှာ Leather Seats များဖြစ်သောကြောင့်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေမည့်အပြင် မတော်တဆစွန်ထင်းခြင်းများကိုအလွယ်တကူသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နိုင်ပြီးအနံ့ဆိုးများထွက်ခြင်းမှလည်းကင်းဝေးစေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကား၏အရှေ့လေကာမှန်မှာ Tinted Glass ဖြစ်သည့်အတွက် ပြင်ပမှရာသီဥတုအပူရှိန်ပြင်းနေသော်လည်းကားအတွင်းခန်းသို့ အပူရှိန်ရောက်ရှိမှုကိုထိန်းပေးနိုင်ပြီးနေရောင်ခြည်တွင် ပါဝင်သော UV Ray ကိုပါကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ကားရှေ့ခန်း Dash Board တွင် လူကြီးမင်းတို့၏ ဖုန်း၊ စာအုပ်၊ သော့တွဲများ၊ ပိုက်ဆံအိတ်စသောပစ္စည်းများကိုသိမ်းဆည်းနိုင်သည့် Glove Box ပါရှိပါသည်။
လုပ်ငန်းသုံး Truck အမျိုးအစားဖြစ်သော်လည်းတံခါးမှန် အတင်အချပြုရာတွင် Power Window များဖြစ်သောကြောင့် ခလုတ်နှိပ်ရုံဖြင့် လွယ်ကူစွာဖြင့် အဖွင့်အပိတ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ….
CD Player, Radio နှင့် AUX များပါဝင်သောကြောင့်လည်း နှစ်သက်ရာ Entertainment အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ခံစားနားဆင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းများတင်ဆောင်ရာ၌ မည်သည့်နေရာမည်သည့်အနေအထားမျိုးနှင့်ပင်ဖြစ်စေအခက်အခဲမရှိအဆင်ပြေစေရန် နောက်ပိတ်အကာနှင့် ဘေးနှစ်ဘက်လုံးကိုပါ အလွယ်တကူဖွင့်ချနိုင်သည့် Catcher ပုံစံဖြင့်ဖန်တီးထားပါသည်။
Fog Lamp (နှင်းခွဲမီး) ပါဝင်သောကြောင့် မြူနှင်းများအုံ့ဆိုင်းနေသောရာသီဥတုမျိုးတွင်ယာဉ်မောင်းသူမှာရှေ့သို့ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတွေ့မြင်နိုင်သဖြင့် မြင်ကွင်းကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုဘဲ အန္တရာယ်ကင်းစွာမောင်းနှင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကား၏ နောက်ဘီးများမှာပုံမှန် Truck ကားများကဲ့သို့ တစ်ဘီးတည်းမဟုတ်ဘဲ Truck ကားကြီးများကဲ့သို့ နှစ်ဘီးတွဲ Double Wheel ဖြစ်ပါသဖြင့် လမ်းကြမ်းမှုဒဏ်ကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးကုန်စည်များတင်ဆောင်ရာတွင်လည်းဝန်စည်ခံနိုင်ရည်အား ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်အပြင် ကုန်စည်မတင်ထားသောအခြေအနေမျိုး၌မောင်းနှင်ရာတွင်လည်းသက်တောင့်သက်သာမောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။
ထို့ပြင် နှစ်ဘီးတွဲ ဖြစ်သောကြောင့် အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ဘီးပေါက်သွားပါကလည်းအခြားတစ်ဘီးနှင့် ဆက်လက်၍မောင်းနှင်သွားနိုင်သည်သာမက Spare Wheel များအနေဖြင့်လည်းရှေ့ဘီးနောက်ဘီးနှစ်မျိုးလုံးပါရှိသောကြောင့် လုပ်ငန်းများအတွက် နှောင့်နှေးမှုမဖြစ်စေပဲအဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ…..
K 3000 ကား၏ဘေးနှစ်ဘက်ရှိ Side Mirror များတွင် ကားအနောက်ဘက်သို့မြင်နူ်ိင်သော နောက်ကြည့်မှန်တစ်ချပ်နှင့် ကား၏အောက်ဘက်ဘီးများကိုပါမြင်နိုင်သည့် Ground Mirror တစ်ချပ် စုစုပေါင်းမှန်နှစ်ချပ် အပေါ်အောက် တွဲဆက်ပါဝင်ပါဝင်သည့် မောင်းနှင် အသုံးပြုသူများအတွက် ပိုမို အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် 09 977 333 999 ,09 969 933 637 , 09 969 933 649 သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်……
Hire Purchase စနစ်ဖြင့်ဝယ်ယူမည်ဆိုပါက ကားတန်ဖိုး၏ ၃၀% ပေးသွင်း၍ ကားအားပိုင်ဆိုင်နိူင်ပြီး ကျန် ၇၀% ကိုဘဏ်အတိုးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ၆ ရစ်မှ အများဆုံး ၁၂ ရစ် ထိ လူကြီးမင်းတို့အဆင်ပြေသလို ပေးသွင်း၍ လည်းဝယ်ယူနိူင်ပါတယ်ခင်ဗျာ……
Selling Price 15,000
30% Down Payment 4,590
Monthly Payment For 1 Year 938